Nezve Nyika yeAmulets
Zvemashiripiti inzira yehupenyu, mashiripiti anga achiwedzera kunze kwehupenyu munzira dzakawanda zvekuti zvingatotadza kuzvinyora zvese. Chikwata chedu chiri kurarama nenzira yemashiripiti kwemakore mazhinji, mazhinji. Munguva ino takave nekukwira nekudzika kazhinji asi hatina kumborega kutenda musimba remashiripiti kuvandudza hupenyu hwedu uye nevevanhu vakatikomberedza. Isu tese tine anoteedzana mabasa (hapana chekuita nebasa redu remashiripiti). Hatina kukanganiswa nedenda recovid-19, mashiripiti edu ari kusvika nekuvandudza hupenyu hwevanhu vazhinji. (chingotarisa ongororo)
Mashiripiti ave angangoita akakanganikwa zvakakwana kwemakumi emakore, asi haina kuzomboenda. Unoyeuka pawakanga uri mudiki, ese mafirimu nezve zvemashiripiti? Iyi yaive nguva iyo iwe pawaiziva kuti mashiripiti ariko chaizvo.
Isu tinongopa mazango nemarin'i anoshanda chaizvo. Zvese izvi zvakaedzwa, kwete kamwe chete, asi kazhinji kazhinji tisati taita kuti zviwanikwe.
Tinokukoka iwe kuti iwo mashiripiti apinde muhupenyu hwako, ufare nawo, tamba nawo uye uwedzere zvese zvehupenyu hwako.
Peter parumwe rwendo rwake rwekubatana nemweya yezvakasikwa
Raquel, mudzimai waPeter ndiye mutorwa mifananidzo wechikwata uye anodzivirira zvakasikwa.
Kana iwe ukatenga kutenga kubva kune wekunze mupi, iwe uchafanirwa kubata kwavari kuitira kutumira uye kuteedzera